Chip haingana Index: traikefa EMV haingana kokoa | Martech Zone
Alakamisy, May 24, 2018 Alakamisy, May 24, 2018 Douglas Karr
Androany tolakandro dia nitsidika ny zanako vavy tany amin'ny biraony aho (Dada manao ahoana aho?). Nijanona teo amin'ilay fivarotana ampitan'ny arabe aho, Ny tsena vaovao ary naka fonosana voninkazo mahafinaritra ho an'ny latabany sy sakafo kely ho an'ny mpiasa ao. Rehefa nijery aho dia vaky ny rivotra… nampidiriko ny Carte de crédit EMV ary niasa saika teo noho eo izany.
Io no haingana indrindra hitako niasa tamin'ny karatra azo ampiasana chip. Tsy izany ihany fa rehefa nahavita ny fandoavako vola aho dia nanontany ahy raha te hanana tapakila vita pirinty aho na handefa izany any amin'ny adiresy mailaka. Fotoana kely taty aoriana dia nanana ny tapakilako ary koa kupon hampiasaiko amin'ny fitsidihako manaraka. Ary tsy mila manonta ny tapakila, mihatra hoazy raha mbola mampiasa carte de crédit mitovy. Boom!
Nahaliana ahy ny momba ilay rafitra, dia niandrandra aho Index - ny sehatra manome hery ny fizahana. Miakatra ny rivotra fa misy zavatra hafa amin'ny teknikan'izy ireo. Nosoratan'izy ireo indray ny rindrambaiko fanodinana amin'ny fisamborana sy fanamafisana ny angon-drakitra kaonty EMV. Ny rafitr'izy ireo aza dia manana fahaizana mampiditra ary maka ny karatrao mandritra ny fizahana - avy eo manamafy ny varotra raha vantany vao vonona ny handeha ianao.
Ity misy topy maso ny amin'ny fomba Namboarina Quick Chip ny index, izay nahafahan'izy ireo nametraka ny fizotry ny fizahana hatramin'ny 1 segondra! Fahefatra folo heny noho ny salan'isa izany, manatsara ny hafainganana amin'ny fizahana sy ny zavatra niainan'ny mpampiasa.
Oh… ary mahafinaritra ihany koa ny The Fresh Market!
Tags: Zahao hoeemvFanondroanatoerana amidypospuce haingana
Templafy: Fitantanana sy famokarana manerana ireo antontan-taratasy, fampisehoana ary mailaka